Lasa fironana miaraka amin'ny sary tsy misy antony | ny biby fiompinao Famoronana an-tserasera
ankehitriny Somary adala ny Internet ary azon'izy ireo porofoina izany karazana meme sy ireo sary hitan'ny olona an-tapitrisany maro isan'andro hatramin'ny iray andro. Toy ny nitranga tamin'ity fanandramana hitaona ny alikanao ity ho "fironana" rehetra.
Hisy mpanakanto an-jatony quary tena mandaitra ny asany, saingy avy eo mijanona ao amin'ny ranomasim-be izy ireo rehefa mampakatra sary ao anaty tamba-jotra ka ny sasany ihany no miavaka. Ary miavaka amin'ny fomba hafa izy ireo toa ny alikan'ilay maherifonay izay nanjary nalaza tampoka.
Jay Cartner, mpanakanto efa manana ny sary sy sary hosodoko nataony nandritra ny 25 taonaNandray tolakandro mahazatra izy ary nanintona an'i Stanley alika mpihazakazaka. Amin'io endrika sy toerana io dia tsy afaka nieritreritra zavatra hafa izy raha tsy ny hanintona azy io satria ny famoronana doodle izay zarain'ny olona an-tapitrisany ankehitriny.
Sary toy ny an'ny zazakely, izay ny kapoka dia arahana hisarihana sary mampihomehy sy mampihomehy izay nalain'ny Stanley alikao. Araka ny filazany ihany, tsy nisy liana tamin'ny asany matotra kokoa. Ary ankehitriny fa ny sary nalainy indrindra, ilay azo sintomina tao ambadiky ny iray amin'ireo bokiny rehefa nankany am-pianarana izy no malaza indrindra, malahelo azy izy.
Nitranga ny zava-drehetra rehefa tamin'ny andro nampahory be dia nanapa-kevitra izy Makà minitra vitsy hanintonana an'i Stanley amin'ny sary mahatsikaiky. Nentiny ireo sarisary ireo ary naoriny tao amin'ny Facebook mba hahitan'ny olona iray fa mahatsikaiky izany. Ary tsy fantany velively fa ho lasa malaza be ry zareo.
Ny anton'ny fahombiazany dia satria, raha ny fanazavany, ny alikany, izay manana toetra manokana ary tsy mamela olona tsy miraika izy ireo. Ianao dia manana ny Instagram hanaraka azy. Aza adino ho an'ny alikan'i Lili Chin.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rehefa manandrana misarika ny alikanao ianao dia lasa fironana izany
Burning Man 2019 no festival faran'izay adalan'izao tontolo izao - manaporofo izany ireo sary ireo